Topnews:-Khilaaf ka dhex qarxay Madaxweynaha iyo Ra''isulwasaraha Somalia ?"Xafiiska iiga bax Istubid"
Topnews:-Khilaaf ka dhex qarxay Madaxweynaha iyo Ra''isulwasaraha Somalia ?"Xafiiska iiga bax Istubid" 14 Febraury 2013 Waagacusub.com- Madaxweyne Garguurte iyo Raísulwasare Saacid ayaa markii ugu horeeysay Shalay (Arbaco 13 Febraury 2013) shaqaalaha Madaxtooyadda hortooda isku dhaafsaday erayo aflagaado iyo hanjabaad huwan kadib markii uu fashil ku dhamaaday wada hadalo u socday todobaad. Madaxweyne Garguurte oo xanaaqsan ayaa Ra''isulwasaare Saacid ku yiri " Anigaa qaldanaa markaan xil kuu magacaabay , iiga bax xafiiskeyga oo Jaadkaad ku caqli tahee raadso"
Ra''isulwasaare Saacid oo xanaaqsan ayaa ugu jawaabay " Luqadii Dameeraleyda ayaad igula hadleysaa ,maxaad Dowladnimo ka taqaanaa waligaaba Cali Mahdi baad u ahayd madaxa Saadka"
Madaxweynaha Hassan ayaa ku dhahay " Waryaa Xafiiskeeyga sooma geli kartaan adiga iyo kan Maaliyada waana idinka qaadayaa xilka hadaad lacagta ku soo celin weysid one week ,Istubidyahoow"
Khilaafka labada Masuul ka dhex qarxay ayaa ka dhashay laba Arrimood:-
1- Ra''isulwasaare Saacid iyo Wasiirkiisa Maaliyadda oo lacag dhan Hal Milyan iyo Sideed Boqol kun oo Dollar kala baxay Bankiga mudadii uu Madaxweyne Hassan ku jiray Safaaradii Mareykanka iyo Yurub.
2- Ra''isulwasaare Saacid oo qaadacay inuu aqbalo qorshaha Mareykanka iyo Yurub ku doonayaan in xilka Raísulwasaaraha Somalia la siiyo Somaliland si loo ogoleeysiiyo inay ka mid noqdaan Dowladda Federalka Somalia.
Gudoomiyaha Bankiga dhexe Somalia Dr Abdisalan ayaa Waagacusub u xaqiijiyay inuu Madaxweynaha ka helay Warqad uu ku amray inuu lacag ku bixin karin Saxiixa Ra''isulwasare Saacid iyo Wasiirkiisa Maaliyadda halka sidoo kalena uu Ra''isulwasare Saacid ka helay Warqad uu ku amray inuu bixin karin lacag uusan fasax uga heysan Wasiirka Maaliyadda.
Ra''isulwasaare Saacid wuxuu Madaxweynaha u gudbiyay Xisaab celin ku saabsan sidii uu lacagta halka Milyan iyo Sideeda boqol Dollar u isticmaalay iyo Safarkiisii Marko iyo Beledweyne hasse yeeshee kuma qancin Madaxweynaha.
Madaxweyne Hassan wuxuu Ra''isulwasaaraha ku yiri "Maku heshiinay inaad Jeeg ka badan Shan kun Dollar saxiixi karin,Wasiirka Maaliyadana sedex kun ,sidee u isticmaali kartaa lacagtii oo dhan ,welibana ku doodee laba Safar ayey ku baxday"
Ra''isulwasaare Saacid ayaa isku difaacay inuu xaq u leeyahay saxiixida lacag walba maadama uu yahay ninka ugu sareeya golaha fulinta,wuxuu dhinaca kale inkiray in lacagta oo dhan ku baxday safaradiisa.
Dowladda Qatar ayaa bil walba lacag dhan Hal Milyan Dollar siisa Dowladda Federalka Somalia halka lacag dhan Sideed boqol kun oo Dollar ay ka hesho Dekadda Muqdisho.
Madaxweynaha wuxuu Ra''isulwasaraha ka dalbaday in lacagta uu todobaad gudaheed ku celiyo Bankiga laakiin Saacid arrintaas wuxuu uga jawaabay "akhriso Dukumiintiga sida lacagta u baxday,tana sharciga ayaa loo fiirinaa hadaan bixin karin"
Lacagta la isku heysto marka la qiimeeyo waxaa dhaba in la lunsaday laakiin sharciyan Ra''isulwasaraha xaq ayuu u leeyahay inuu Lacagta Bankiga weydiisto iyadoo looga baahan yahay Xisaab celin.
Guddi beesha Mareexaana oo Ra''isulwasaaraha kula kulmay Muqdisho ayaa cadaadis ku saaray inuu jagadiisa xajisto ama xilka iska casilo.
Gudigga waxay Ra''isulwasaare Saacid ku dhaheen " Xoog iyo Xoolo Daarood baad u tahay ee meesha ka muuqo ama ka maqnoow"
Madaxweyne Hasaan Mohamud Alasow wuxuu qorsheeynayaa inuu shaqada ka eryo Ra''isulwasaare Saacid laakiin isweydiintu waxay tahay sida uu xilka qaadis ugu sameeyn karo.
Ra''isulwasaare Saacid wuxuu aaminsan yahay in Khilaafka isaga iyo Madaxweynaha yahay mid aan quseeyn lacagta balse uu yahay mid ku dhisan Iririsim iyo sidii qof beesha Isaaq u dhashay loogu bedeli lahaa booskiisa.
La soco Warbixin ku saabsan qorshaha cusub ee Xilka Ra''isulwasaaraha loogu magacaabi rabo qof ka soo jeeda beesha Isaaq iyo gulufka Madaxweyne Garguurte.
Fiiro gaara: Warbixintaa waxaan ka aruurinay Saraakiil iyo masuuliyiin ka tirsan Madaxtooyadda Somalia laakiin nasiib daro ma xigan karno magacyadooda Sii akhri Wararkeena Waagacusub.com